Petite vitesse, Anosibe Nakatona avokoa ny tsena
Manoloana ny fitangoronan’ny olona marobe eny amin’ireo toerana ahitana tsenamaro toa an’Anosibe, Ambodin’Isotry,
Tohana ara-tsosilay Mitaky fanampiana ireo mpitondra Bajaj an’Ambohidratrimo
Nahatsiaro no nataon’ny filoha ho zanak’Ikala hafa ireo mpitondra bajaj eny Ambohidratrimo nefa miasa eo amin’ny sehatry ny fitateram-bahoaka ihany koa no sady mitady izay harapaka isan’andro, rah any fampitam-baovao avy amin’izy ireo.
Sabotsy Namehana Milahatra isan’andro miandry fanampiana ireo zokiolona
Very fanahy mbola velona ny sefom-pokontany ao Morondria, kaominina Sabotsy Namehana, distrikan’Antananarivo Avaradrano.
Tsena mora Miteraka savorovoro…
Ny sabotsy lasa teo nisy ny fampahafantarana fa miato aloha ny tsena mora eto Antananarivo eny anivon’ny Boriborintany 6, Atsimondrano, Avaradrano, ary Ambohidratrimo noho ny tsy fanajana ny lamina ara-pahasalamana.
Mahajanga sy Fianarantsoa Nahazo fanampiana ireo mpianatry ny oniversite
Tsy teo an-drenivohitra ihany fa dia nahazo ny anjarany tamin` ny “vatsy Tsinjo” na ny tohana ara-tsosialy ihany koa ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny oniversite Mahajanga sy Fianarantsoa.
anivon’ny Centre d’immatriculateur na ny CIM etsy Ambohidahy, raha araka ny fanazavan-dRandriamahafehy Briand, tompon’andraikitra voalohany ao an-toerana. Tsy raisin’ny logiciel an’ny CIM mantsy izany raha araka ny fanazavany na dia 18 taona latsaka iray volana aza ilay olona. Ireo ankizy 17 taona sy 7 volana hoy izy no afaka manao fangatahana manokana ho feno taona (dérogation à l’âge légal) ao amin’ny minisiteran’ny Atitany ary rehefa mahazo izany izy ka ekena dia afaka mianatra mitondra fiara soa aman-tsara saingy tsy maintsy miandry 18 taona katroka vao mahazo ilay taratasy fahazoan-dalana hamily fiara eo anivon’ny CIM. Mikasika ilay fanoloana permis mitondra ny laharana 0T ho tena biometrika tanteraka etsy amin’ny Alhambra Ankadimbahoaka, fanampin’ny ivontoeran’ny CIM moa dia fantatra fa efa mahatratra 870 hatreto ireo olona tonga nanatona teny an-toerana, izany hoe : efa manodidina ny 60 isa isan’andro. Ho an’ireo permis mitondra ny laharana 1 T…. dia nambaran’ity tompon’andraikitra ity fa miandry ny tetiandro voatondro hatrany isika rehetra.